Cayayaankii Habar-majeerteen Oo Ka Qaxaya Magaalada Gaalkacyo – Codka Qaranka Tanadland
Cayayaankii Habar-majeerteen Oo Ka Qaxaya Magaalada Gaalkacyo
Sidaad ogsoontihiin waxaa jira dareen iyo shucuur umadeed oo ay wadaagaan qawmiyaduhu. Dareen kaas qadiyaddeed oo ku taagan qof kasta oo u ku jiro dhiiga umad daasi. Anigu shaqsiyan hadaan iska hadlo aniga oo da’deydu ay aad u yartahay oo arday ah ayaan waxaan ku biiray garabka hubaysan ee jabhaddii (SNDU) sanadkii 1981 -ga. Goortaas oo aan uga faa’iideystey xiligii xagaaga ahaa ee aan fasaxa ku jirey. Waagaas waxaa jirtey in dadka mahbarka ah ee ciidanka dowladda am hay’adaha dowladda ka tirsan oo xilalka ka haya, ay buul wada noqdeen oo dadka ka hooseeyaa ay xilkooda si dadban u isticmaalijireen maadaama ay dad mahbar ah oo aan la aaminikarin ay ahaayeen. Xamaasada shacabka reer Tanadland siday u kacsanayd waagaas hadaan idiin sifeeyo. Degaamada miyiga dhiigu siduu rag ugu garooray walow aysan xaaladdu gaarin, hadana magaalada Xamar dadka ku nooli waa ay kacsanaayeen.
Subixii aan magaalada xamar ka soo bixitimay mar ka sii horeysey, ayaan goor caweysin hore ah waxaan bariidin iyo macasalaameyn aan ugu tegey qoyska nin adeerkay ah. Markaan gurigii reer adeerkay aan tegey, ayaan intaanan guriga fadhigiisa gaarin daaradda waxaan ku arkay dhiig daadsan. Dabeed waxaan ogaadey guriga in ay labo nin isku dileen oo mid labo ilig laga tuuray gafuurkana la bararshey. Sababta dagaalku uu ka dhashayna waxay ahayd, cida waxaa la deganaa nin mahbar ah oo la dhashay islaanta adeerkay u dhaxda. Adeerkayna jabhadda mahbarka ee dabadhilifka ah iyo idaacadda qurmista la yiraahdaba nin aad u neceb buu ahaa. Marka habeenkaas wuxuu guriga soo galay wiilkii mahbarka ahaa oo qol ku dhegeysanaya idaacaddii qurmista la oranjirey. Markaas ayuu ka carooday oo u feer iyo haraati uu kala daaley.
Bilowgii sanadkii 1981 -ka beesha Habar-majeerteen waxay samaysay jabhaddii Mahbarka ee la oranjirey “Soodafta”, oo gaari ama qori intay dowladda kala baxsadaan la gelijirey wadanka itoobiya. Dabeed taariikhdu markii ay ahayd (28/04/1981) -kii saraakiisha ciidamada dowladda ugu jirey beesha (Muumin Aadan) waxay abaabuleen, jabhad la dagaalanta jabhadda mahbarka ee SSDF. Markii la aas-aasay labada garab ee jabhadda wadaniga ah ee SNDU (28/04/1981). Hadafka loo aas-aasay labada garab ee jabhadda SNDU waa’ay kala duwanaayeen.
Hadafka Garabka Ciidamada Ee SNDU :-
1) Garabka ciidamada ee jabhadda SNDU waxaa loo aas-aasay inay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan jabhadda dabadhilifka ah ee SSDF.
2) Inay ka bar-bar dagaalamaan oo ay taageeraan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira ciidanka itoobiya iyo dabadhilifyada mahbarka ah ee ay wataan.
3) In degaamada beelaha reer Tanadland ee gobolada Mudug, Nugaal iyo Bari laga sameeyo xarumo ciidan oo ay leedahay Jabhadda SNDU.
4) In saraakiisha ciidamada ee beesha (Muumin Aadan) ay doortaan xubnaha golaha sare ee labada urur.
5) In saraakiisha ugu jira ciidamada dowladda beesha Habar-majeerteen ay hawlgab ka dhigaan oo ay ku shaabadeeyaan inay “Mahbar” yihiin.
Hadafka Garabka Siyaasadda Ee SNDU :-
1) Maadaama beesha Habar-majeerteen ay samaysatay jabhad ciidan oo dowladda itoobiya ay soo hubaysay, in madaxweynaha JDS (Maxamed Siyaad Bare) ay wadaxaajood la galaan, iyadoo ay ujeedadu tahay in dowladda soomaaliya ay aqoonsato jabhadda wadaniga ah ee (SNDU). Si markaas ciidamadoodu ay uga bar-bar dagaalamayaan ciidamada xooga dalka ee dagaalka kula jira ciidamada itoobiya iyo jaajuusiinta mahbarka ee ay wataan.
2) In garabka siyaasadda ee Jabhadda SNDU ay qorsheeyaan oo ay diyaariyaan, miisaaniyad lagu hawlgeliyo jabhadda SNDU hadii ay aqoonsi iyo taageero ka waayaan dowladda soomaaliya.
Nasiibwanaag, kulankii ugu horeeyey ee hogaanka garabka siyaasadda ee jabhada (SNDU) iyo madaxweynaha waa laysku afgartay. Guul buuna shir kaasi ku soo gabageboobey. Taariikhdu markii ay ahayd (19/06/1981) jabahada (SNDU) waxaa dowladda soomaaliya ay aqbashay codsigii ahaa, in loo aqoonsado jabhad wadani ah oo ka bar-bar dagaalanta ciidamada qaranka ee Soomaaliya.
Qodabada muhiimka ah ee ay dowlada Soomaaliya iyo jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) ay ku heshiiyeen waxay ahaayeen :-
1) Jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) oo loo aqoonsaday jabhad wadani ah oo ay ciidamadeedu ka bar-bar dagaalamaan ciidamad qaranka.
2) Ciidamada jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) oo dawladdu ay u ogolaatay in xeryaha ciidamada dowladda ay ka qaataan wax alla iyo waxay hub iyo saanad u baahdaan.
3) Saraakiisha ciidamada jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) oo ka tirsanaa ciidamada dowlada oo loo ogolaaday inay mushaarkooda iyo wixii xaquuq ah ee ay dowladda ku lahaayeen ay u socondoonto.
4) Askarta jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) oo la diiwaan geliyey.
5) Ciidamada jabhadda wadaniga ah ee (SNDU) oo loo qoondeeyey saanadda iyo saadka kale, ee askeri kastaa bil kasta uu qaadanayo iyo meesha ugu dhow ee uu ka qaadanayo.
Saas oo ay tahay beelaha reer (Cismaan Yuusuf) ee gobalka mudug dega iskuma ay raacsanayn in lala dagaalamo beesha Habar-majeerteen, hadii ay dhacdo inay hub la soo galaan gobalka mudug. Beesha (Reer Fiqi-Ismaaciil) oo ka mid ah beesha (Cismaan Yuusuf) beelaha ka dega gobalka mudug. Ahna beel weyn oo miisaan culus ku leh beelaha dega gobalka Mudug, xataa shirkii lagu aas-aasay jabhadda SNDU laguma casumin inay ka soo qaybgalaan. Arintaasna waxaa u sabab ahayd laba arimood oo muhiim ah.
1) Beesha reer (Fiqi Ismaaciil) oo an ka qayb qaadan dagaalkii beesha (Muumin Aadan) ay ku jebisey beesha Habar-majeerteen sanadkii 1954 -ka.
2) Beesha (Muumin Aadan) oo ogaadey goobtii (Foodyacade) inay yihiin niman balaah oo aanay Habar-majeerteen u babac dhigikarin. Dareenka beesha (Muumin Aadan) ay qabeen waagaas wuxuu ahaa hadii beesha qayb ka mid ah xataa ay dagaal la galaan Habar-majeerteen oo dhan, Marna cidaani reer la hor istaagikaro maaha oo waa ay cayrsanayaan wixii ka hor yimaada.
Isla sanadkii la aas-aasay jabhadda wadaniga ah ee SNDU ee 1981 -ga degaamada ciidka, caduun iyo dooxada golol ku yaala ee degaanka u ah beelaha reer (Cismaan yuusuf) oo dhan. Waxaa la geeyey kayd hub iyo saanad jabhadda SNDU ay leedahay. Anigu sanadkii 1981 -gii xamar baan inta ka tegey fasixii aan gobalka Mudug tegey si aan mahbar u soo laayo. Nasiibdaro maanan arag mahbar qori wata marna. Mahbar kuna waa ay ka biqijireen in qoryihii yaraa oo faalgureyga ahaa oo u qadaafi siiyey inay wadanka la soo galaan. Waana sababta baajisay in ciidamada SNDU ay xasuuqaan beesha Habar-majeerteen. Furinta ciidka oo ay ka dagaal gelijireen ciidamada Jabhadda SNDU waan tegey waana aan ka soo dagaalamay. Laakiin sidii la filahayey meysan joogin maleeshiyo mahbar ah oo ka feer dagaalamaya ciidamada itoobiya, oo dabadhilifyada mahbarka ah ee la baxay SSDF hawshoodu waxay ku koobnayd jaajuusnimo.
Waxa Aan Tolkay Ku Aqaan Iyo Dareenka Maantay Ku Taagan :-
Intii ka danbeysey sanadkii 1981 -ka 12 dagaal baan ka qayb qaatay, 7 ka mid ahna waa an ku dhaawacmay. Maalintii ugu horeysey oo aan tolkay ka feer-dagaalamay waxay ii ahayd maalintii aan janada galay. Maalintaas waxaan yaqiinsaday dhab ahaanta waxaan aabahay iyo adeeraday aan ka maqlijirey. Maalintaas waxaan ogaadey inay run yihiin wixii aan rumaysnaa, wixii tolkay rumaysnaa. Oo ahaa inaan dagaal lagu kala adkaan ciidan iyo hub badni. Ee dagaalka waxa lagu kala adkaadaa ay tahay hab-dhaqan. Hab-dhaqan kaas oo isugu jira dareen, shucuur iyo ficilo lagu soo dhaqmijirey oo soojireen ah. Dhaqamadaasna waxaa ugu muhiimsan fool-adayga umadi ay u leedahay xabad ku soo dhacaysa inay uga hor-tagto. Sanicii awoowe iyo sinjina waa ma guuraan!!. Wiilka aabihiis iyo awowgiis maalin fooda la isdaray dacarta laga waraabiyey oo dhegta dhiiga loo daray, tolkiisna dagaalka looga adkaanjirey bayr buu yeeshaa. Guuldarada iyo jabkuna waxay u noqdaan wax uu dhaxal u helay.
Shucuurta gaashaan-qaadka beesha (Muumin Aadan) libintii goobtii (Foodyacade) sida ay ugu weyntahay wax ugu weyn oo aan ahayn xarafka diimeed ma’ay jiraan. Dagaalkii (Foodyacade) wuxuu ahaa dagaal lagu qasbay oo ay ka fursan waayeen beesha (Muumin Aadan). Dagaalkii (Foodyacade) wuxuu dhacay mar beesha (Muumin Aadan) aysan haysan rasaas iyo hub ay kula dagaalamaan cadowgooda. Dagaalkii (Foodyacade) wuxuu ahaa dagaal kibir salka ku haya oo inta nin la diley hadana la inkiray. Dagaalkii (Foodyacade) wuxuu dhacay goor beesha Habar-majeerteen aysan fileyn inay beesha (Muumin Aadan) soo weerarto, oo ay ogyihiin inaysan haysan hub iyo saanad ku filan oo ay kula dagaalamaan. Cadowgayagana hubkii iyo rasaastii xeryaha dowladda ay ka soo daldasheen ay u tuuranyihiin.
Laakiin go’aanka beesha muumin aadan wuxuu noqday inay cadowga weeraraan, saldhigga ciidan ee ugu muhiimsan oo ay hubka iyo saanaddu u taalana ay ka qabsadaan. Dagaalkii (Foodyacade) dagaaladii dhacay sanadkii 1954 -tii wuxuu uga duwanaa, goobihii kale ee (Dhudub) iyo (Car-Istaag) wuxuu ahaa dagaalkii ugu kharaaraa. Dhimashada raga dagaalka ku dhintayna 3 meelood markay ugu yaraato 2 meelood waxay ahaayeen ciidanka beesha (Muumin Aadan). Balse walow ragii ku dhintay goobtii (Foodyacade) intooda badani ay ahaayeen beesha (Muumin Aadan), saas oo ay tahay dagaalka muhiimaddiisii waxaa ku guuleystey beesha (Muumin Aadan). Goobtii (Foodyacade) ciidmada weerarka ahaa ee beesha MA waxay qabsadeen saldhiggii maxaysatada Habar-majeerteen, dhaawacoodii iyo wixii hub iyo saanad halkaas u yaaley. Taas waxaa ka sii daran firxadkii ciidanka beesha Habar-majeerteen markay cido galeen waa’ay ku dhiciwaayeen inay runta ka sheegaan sida ay uga adkaadeen, ciidan aan hub haysan oo waranleyaal u badan. 11 kii nin oo waranleyaal ahina ay nin qori kaarabiin ah sita dabo taaganyihiin. Dagaalkii (Foodyacade) wuxuu ahaa dagaalka ay beesha Habar-majeerteen u qaadanweydey sida looga adkaaday, oo ay yiraahdeen “Fal baa na qabtay oo waa nala sixray”.
Guushii dagaalkii (Faadyacade) waxaa ka dhashay marxalad cusub. Habar-majeerteen waxaa u cadaatay hadii beesha (Muumin Aadan) oon hubaysnayn intay weerar ismiidaamin ah soo qaadeen, ay saldhigoodii ciidan iyo wixii hub u yaaley ay ka qabsadeen . Inaan iyaga oo hub iyo saanad fiican haysta aan jaaha la saarikarin. Waana arinta u sababta ah in sadexdii dagaal oo dhacay sanadkii 1954 -ka, in beesha (Muumin Aadan) ay sadexda jeerba weerarka qaadeen. Beesha Habar-majeerteen na aysan marna weerar u qaadin oo ay difaaca ugu jireen. Dagaaladii dhacay sanadkii 1954 -kii dagaalkii ugu horeeyey wuxuu ahaa (Foodyacade). Dagaalkii ugu danbeeyeyna wuxuu ahaa dagaalkii (Car-Istaag). Dagaalkii (Car-Istaag) oo jabkii ugu xumaa beesha Habar-majeerteen loogu geystey, intaanay ciidamada beesha (Muumin Aadan) aysan weerarka qaadin shaki ugama uusan jirin natiijada dagaalku waxa ay noqon doonto. Dagaalkii (Car-Istaag) oo lagu quusiyey Habar-majeerteen, intii ka danbeysey, Beesha Habar-majeerteen isuma aysan ciidamin. Waana sababta kaliya oo ay ciidamad beesha (MA) ay dagaalka u joojiyeen. Maadaama sadexdii weerar ee ciidamada beesha MA ay qaadeen sadexdaba ay ku adkaadeen. Habar-majeerteen markii xataa ay ka baqeen inay ciidan difaac ah ay meel isugu geeyaan. Cabsi ay ka qabeen Habar-majeerteen in la soo weeraro darteed.
Beesha (Muumin Aadan) danta keliya oo ay ka lahayd aas-aaskii Jabhadda SNDU waxay ahayd inay jabhadda beesha Habar-majeerteen ay kula dagaalanto, ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba. Beesha habar-majeerteen markii Jabhadda dabadhilifka ah ee SSDF ay samaysatay oo dowladda itoobiya ay soo hubaysay. Dhiiga ayaa ku karay beesha (Muumin Aadan). Waxaana u cadaatay in dagaal ay ku qaadaan mahbarka oo ay ku jebiyaan uu lama huraan yahay. Sababta oo ah waxaa u muuqatay xaalad la mid ah marxaladdii dagaalkii (Foodyacade) inay ku soo fool leedahay.
Dagaalkii (Foodyacade) kama uusan dhicin dhul dooxo ah oo uu ka baxo geedka la yiraahdo Foodyacade, ee wuxuu ka dhacay degaanka ciidka ah ee ku yaala galbeedka gobalka Mudug. Laakiin sababta dagaal kaasi uu kula baxay (Foodyacade) waxay ahayd, ciidamada weerarka qaaday ee beelaha (Reer Xassan Muumin), (Xirsi Muumin) iyo (Maxamed Muumin) oo ogaa in ciidan badani ay dagaalka uga dhiman doonaan. Marka nin kastaaba wuxuu madaxa ku soo xirtay kafan. Maadaama ay waranleyaal u badnaayeen oo aysan intooda badani aysan hub wadan. Gaashaan-qaadka beesha (Muumin Aadan) goobtii Foodyacade weligeed waxay u ahaan doontaa dagaalkii ugu kharaaraa ee ay ku guuleystaan. Sidaan horay u sheegay beesha (Ree Fiqi-ismaaciil) oo la degaan ah beesha (Muumin Aadan) dagaalka lama aysan gelin. Sababtuna waxay ahayd beesha (Cali Muumin) oo beelaha waaweyn ee (Muumin Aadan) ka mid ah. Balse aan la degaan ahayn beelaha kale ee (Muumin Aadan) ayaa la diidey oo lagu yiri “Hada ciidan idiinkagama baahnine joojiya ciidanka aad soo diraysaan”. Arintaasna waxaa u sabab ahaa laba arimood.
A) Dagaalka oo mudo gaaban socdey oo sidii la filayey aan dabo dheeraan.
B) Sadexda beelood ee beesha (Muumin Aadan) gobalka mudug ka dega oo sadexdii duulaan oo ay qaadeen, sadexda jeerba dagaalka uga adkaaday beesha Habar-majeerteen oo si xun ugu jebiyey.
Dagaalka Tanadland Iyo Isbahaysiga (Pintiland) U Dhexeeya :-
Ugu horayn waxaan rabaa inaan halkaan ku xuso in (15 ka October) ay tahay maalin muqadas ah, oo ku weyn quluubta dadka reee Tanadland. Taariikhdu markii ay ahayd (15/10/ 2007) waxay ahayd maalintii cadowgayaga soojireenka ah ee Habar-majeerteen iyo xulufadooda, araxda ay ka jebiyeen ciidamada geesiyiinta ah ee Somaliland oo ay ka qabsadeen gobalka Sool. Maalintaas wixii ka horeeyey, marka aanu laynayno beesha Habar-majeerteen iyo midiidinadeeda dagaalku qarsoodi buu noo ahaanjirey. Laakiin maalintaas wixii ka danbeeyey anagoo ragii Daarood ugu xabadda kululaa ah, ceeb bay nagu ahayd inaanu isqarino marka aanu layno gunta Habar-majeerteen iyo midiidinkeeda. Warsangeli iyo Dhebayaco labaduba waa asal-madoorsheyaal. Shakina noogama u jiro inaysan layahy raganimo ay ku hor istaagaan, nimankii “Gaas-dhagoole” ahaa haday ku soo farobaxsadaan. Dhulbahante inay niman rag ah oo waxna gala waxna guda yihiin waa la wada ogsoonyahay. Maalintii ay Habar-majeerteen ka quusteen oo ay ogaadeen inaysan waxba u tarikarinna isbahaysigii Puntland wuxuu noqday Pintiland, oo wuxuu yeeshay magac dhedig oo loola jeedo Habar-majeerteen.
Khaxa Habar-majeerteen Ay Ka Qaxayso Gobalka Mudug Maxaa U Sabab Ah?
Khaxa ay agoonta Habar-majeerteen ka khaxayaan magaalada Gaalkacyo wuxuu soo bilowday dagaalkii labada maalmood ee lagu jebiyey beesha Habar-majeerteen iyo xaabada ay cagaha ku qaadato, taariikhdu markii ay ahayd (01/09/2011) iyo (02/09/2011). Beesha Habar-majeerteen waa niman diciifnimo intay ka qabaan aan xataa runta isu sheegikarin oo been isku maaweeliya. Dagaalkii (Foodyacade) waxay yiraahdeen waa nala sixray oo fal baa na qabtay. Dagaalkii (Car-istaag) na waxay yiraahdeen waa nala gaaday oo anaga oo tukanayna ayaa nala xasuuqay. Laakiin burjiga ay dagaalka u leeyihiin daddka reer Tanadland waxaa muujinaya dagaalkii labada maalmood, oo weliba beelaha reer (Cismaan Yuusuf) iyo (Maalismoge) lagu khatalay maalintii danbe ee dagaalka. Oo heshiis been ah oo xeelad dagaal ah ay la galeen (Cali Ugaas), si ciidamadii gurmadka ahaa ee (Halabooqad) yimid fiidkii maalintii hore ee dagaalka si loo celiyo. Marka dagaalkii labada maalmood in uu labo maalmood socdo waxaa u sabab ahaa (Cali Ugaas). Ee marna maysan dhacdeen in Dhebayaco bawdyo-kuusi ay labo maalmood na hor istaagto. Dagaalkii labada maalmood ciidanka reer Tanadland waxaa uga shihiidey 8 nin oo kaliya. Weliba sideed daas nin 6 ka mid ah waxay ka soo kala jeedaan, 2 nin oo beeshaa (Reer Fiqi – Ismaaciil) ah, 2 nin oo beesha (Reer Axmed) ah iyo 2 nin oo beesha reer (Xassan Xusseen) ah. Marka maadaama ay dhaawaca iyo dhimashada soo gaartey ciidamada reer Tanadland ay aad u yarayd. Beelo badan oo waxaa jira lagu xifaaleeyo inaysan dagaalka gelin maadaama aysan rag uga shihiidin.
Laakiin beesha Habar-majeerteen iyo midiidinkii ay wateen waxaa ku dhacay halaag, waxaana dagaalka looga diley 123 nin. Beesha raga ugu yari ay dagaalkaas uga dhinteena waxay ahayd beesha (Awrtable) oo laga diley 8 nin. Beesha (Awrtable) oo malah islahaa ciidnka beesha Hartigu waxbay jiirahayaan. 18 kii nin ee u dagaalku ka biloday oo ay beesha (Muumin Aadan) laysay subixii uu dagaalku bilowday, waxaa ku jirey nin mahbarku ay garaado u xireen oo ay ku yiraahdeen sargaal baad tahay ee noo shaqee oo doqon ah. Labadii maalmood oo u dagaalku socdeyna waxaa beesha (Awrtable) ka dhintay 7 nin oo kale oo qawsaaro ah. Laakiin beesha jabka ugu weyn loogu geystey dagaalkii labada maalmood oo lagu quusiyey waxay ahayd beesha Habar-majeerteen, oo dagaalka loogaga diley 57 nin. Dagaalkii labada maalmood u jeedada ay beesha Habar-majeerteen ka lahayd wuxuu ahaa in lagu baajiyo xasuuqa joogtada ah ee lagu hayo shacabkooda, ku nool galbeedka xaafadda Israac ee magaalada Gaalkacyo. Markii dagaalkii ay soo qaadeen si xun loogu jebiyeyna waxay bilaabeen inay magaalada Gaalkacyo ay ka qaxaan. Taas waxaa uga sii darayd xasuuqii lagu hayey gunta Habar-majeerteen oo dagaalkii labada maalmood markii uu dhamaaday halkiisii ka sii socday.
Sanadkii ina dhaafay ee (2016) -ku wuxuu ahaa sanadka dadkii ugu badnaa oo Habar-majeerteen ah lagu laayey gobalka mudug, tan iyo markii xasuuqa joogtada ah lagu bilaabay beesha Habar-majeerteen sanadkii 1998. Sanadkii hada dhamaaday ee 2016 -ka waxaa beesha Habar-majeerteen siyaalo kala duwan looga diley 126 nin, iyo 9 dumar ah. Shirqoolkii beesha Habar-majeerteen lagu xasuuqay ee ka dhacay suuqyaraha xaafadda Garsoor ee xerada Dayax. Dadka Habar-majeerteen ee lagu xasuuqay maalintiii la halaagey waxay ahayd 43 nin iyo 9 haween ah. Balse dabeed dhaawicii waxaa ka go’ay labo nin. Taas oo ka dhigtay tirada dhimashada Habar-majeerteen la gaarsiiyey 45 nin iyo 9 dumar ah. Istuuryayntii dhowaan magaalada Gaalkacyo ka dhacdayna waxaa looga diley beesha Habar-majeerteen 75 nin. Lixda nin ee kalana waxaa laayey ciidamo iskujir ah oo u wato nin Ogaadeen ah, ciidamadaas oo ka tirsan ciidamada ismaamulka ee gobalka Doolo. Ciidanka duulaanka soo qaaday waxaa adeegsaday oo ku hogaamiyey nimanka Habar-majeerteen in la laayo. Beesha (Muumin Aadan) ee iska leh degaanka nimanka mahbarka ahi ay rabeen inay ceelka ka qotaan. Degaan kaas ayaa ah dhul-daaqsimeed ku yaala gudaha xuduuda gobalka Doolo ee ismaamulka Soomaalida.
Ciidamada ismaamulka Soomaalida ee itoobiya ayaa waxay ka koobanyihiin beelihii dowladdii xaylesalaase ay diiwaan gelisey, oo ay isimadooda magaalada Adis-ababa ay kula shirtay. Sida (Suldaan Mursal “Farasle) oo magaalooyinka (Wardheer) iyo (Qabridahare) labo bahood ay u deganyihiin. Ahna suldaanka beelaha reer Tanadland ee degan gobalada (Qoraxey), (Doolo), nawaaxiga iyo magaalada Qalaafe. Saas oo ay tahay ciidamada degaanka soomaalida ayaa markay ugu yaraadaan ah 90%, ciidamadii garabka ONLF ee la heshiiyey dowladda Itoobiya. Saas darteed wiilashii aynu dhalnay ee (Bah-Tanade) qaasatan nimanka talada haya ee (Maxamed Subeer), marka ay ciidan soobixiyaan oo xabadda lagu bilaabo dhebayaco. Sidii maalintii dhaweyd dhacday oo kale ayey iyaga oo gacmaha kor u taagaya, oo raba inay isdhiibaan ay xabaddu leefaysaa. Waayo waa ay ogyihiin cadaawadda iyo ciilka uu Ogaadeen u qabo Dhebayaco bawdyo-kuus. Marka Habar-majeerteen ma’ay rabaan inay fursad siiyaan ciidamada degaanka oo ay xabad xagooda u ridaan.
Waxaa kaloo jirtey sanadkii hore in sidaan oo kale, niman Habar-majeerteen ahi ay damceen, inay degaan ka mid ah Gobalka Xariir inay ceel ka qotaan. Markaas ayaa nimankii inta ay niman beesha (Muumin Aadan) ahi weerareen waxay ka dileen 3 nin. Gaari qori dhashiike ahi saaranyahay, riigii ceelka qodayey iyo rag xayn ahba ay ka qabteen. Markaas ayaa jifadii ceelka rabtey inay qodato ay u yimaadeen beesha (Muumin Aadan) iyagoo u sheegay arin sir ah, oo ku saabsan nimanka rabey inay ceelka ka qotaan gobalka Xariir nimanka soodiray oo adeegsadey.
Sidaad ogsoontihiin, umadda reer Tanadland culays weyn baa saaran. Umadda reer Tanadland waxay ku qasbantahay inay weerar abaabulan ay ku qaado gunta Habar-majeerteen. Mudo dheer baanu nimanka shirqool ku layneyney welina magaalada Gaalkacyo ayey dhinac ka joogaan. Guushii dagaalkii labada maalmooda waxaa naga dhiciseeyey nimankii dagaalka joojiyey iyadoo uu cadowgu firxad yahay. Maalintaas waxay ahayd inuusan ciidanku hakan jeer uu magaalada Garoowe gaaro. Habar-majeerteen waa cayayaan u baahan inaynu cidibtiro. Oo waa cadow loo baahanyahay inaynaan marna ka daalin xasuuqooda ilaa aynu dabargayno. Sida ugu haboon ee cayayaanka Habar-majeerteen aynu ku dabargoyn karnaana waa inagoo weerar balaaran oo kedis ah ku qaadna. Habar-majeerteen si kasta oo aynu ragooda shirqool ugu xasuuqno ma’ay rabaan inay nala dagaalamaan. Sababta oo ah iyaga nabadda ayey dani ugu jirtaa oo colaadi haday dhacdo, waxay isleeyihiin wax kasta waa laydin kala wareegahayaa. Arintaas waxaa cadayn u ah dagaalkii labada maalmood wuxuu ahaa marka kaliya ee beesha Habar-majeerteen ay ku dhiiratey inay iska kaaya dhiciso, oo ay ku tashatay inay isdifaacdo markiina anagaa gacanqaadka kala hormaray oo 18 nin ka diley. Kuna qasabnay inay nala dagaalamaan. Ciidanka ay Garoowe kala yimaadeen wuxuu ahaa 1500 oo nin. Ciidankaas markii rag yar oo 123 nin ah laga diley magaaladana laga saaray, oo ay cabsi darteed agoonta galbeedka xaafadda israac degta ay ku dhiciwaayeen in dhaawaca tolkood loo geeyo oo ay daaweeyaan. Ayey baqo carareen oo ay Garoowe carar ku tageen. Sababta oo ah Habar-majeerteenku waa’ay ogyihiin inanu isku goob meydkooda warayno oo aanaan u daahayn. Marka ay taasidhacdana aysan ciidanka beelaha reer Tanadland ee gobalka Mudug aysan joogsan doonin jeer ay mahbarka ka sifeeyaan gobalada Mudug, Nugaal iyo Bari.
Halka docda kale aysan jirin anaga wax dan ah oo noogujirta nabadda haba yaraatee!!.
Dhowaan beelaha (Cismaan Yuusuf) iyo (Maalismoge) ka dega gobalka mudug waxay doorteen taliska hogaanka ciidamada. Taliyaha ciidamadana waxaa loo doortay nin ka soo jeeda beesha (Reer Fiqi-Ismaaciil). Hogaanka cusub ayaa waxaa la sameeyey intii ay socotey istuuryeyntii gaalkacyo ka dhacday. Waxaana la rumeysanyahay xeeladdii dagaalka oo ay adeegsadeen inay u sabab ahayd jabkii gaarey maleeshiyada beelaha Sacad iyo Habar-majeerteen.